कतिपयले सस्क्राइब र भ्युअर बढाउनका लागि जे पनि गर्छन् | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » कतिपयले सस्क्राइब र भ्युअर बढाउनका लागि जे पनि गर्छन्
कतिपयले सस्क्राइब र भ्युअर बढाउनका लागि जे पनि गर्छन्
–कमल मण्डल, कलाकार एवं युट्युवर
युट्युब च्यानल किन सञ्चालन गर्नुभयो ?
–अहिले युट्युव साह्रै चर्चित भएको छ । समाजिक सञ्जाल जस्तै यो पनि हरेक क्षेत्रको पहुँचमा पुगेको छ । र, आफ्नो कुरा राख्न सजिलो माध्यम भएकाले मैले पनि सञ्चालन गरेको हुँ ।
युट्युबबाट निकै कमाई हुन्छ भन्छन् नि त्यही भएर उत्ता लाग्नु भएको हो कि ?
–धेरै कमाई हुँदैन, जसले त्यस्तो भनेको छ त्यो गलत भनिरहेका छन् । युट्युबको बारेमा गलत प्रचार भइरहेको छ । महिनाको लाखौ रुपियाँ कमाई हुन्छ भन्छन् तर मैले त्यस्तो कही देखेको छैन । अरुले कसरी कमाउँछन् मलाई थाह छैन तर म पनि युट्युव चलाइरहेको छु, महिनाको १२–१५ हजार रुपियाँ मात्र कमाई हुन्छ । अरुले थप १५ हजार कमाओस् त्यति न हो तर लाखौं रुपियाँ भन्छन् त्यो अलि बढी नै हल्ला भएको हो ।
अहिले त युट्युब छ्यापछ्याप्ती छन् । यदि फाइदा छैन भने किन त्यति सारो गरेको होला त ?
–हो मैले पनि देखेको छु । युट्युवका लागि मान्छेले निकै लगानी गरेको छ । कार्यालय सञ्चालन गरेर, क्यामरासहित स्टाप राखेर युट्युव सञ्चालन गरेको पनि मैले देखेको छु । र, मैले त कपिपय युट्युवर डुवेको पनि देखेको छु । कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकेर सोफा र कुर्सी घर लगेर बजारमा पुराना क्यामरा बेच्दै हिडेको पनि देखेको छु । त्यसैले बाहिरबाट जति राम्रो देखिन्छ भित्रको व्याथा छुट्टै छ ।
कस्तो व्याथा ?
–युट्युव सञ्चालन गर्ने र त्यसको नाममा बार्गेनिङ्ग गरेर पैसा कमाउने गरेको पनि हेरेको छु । युट्युवमा भिडियो राख्दा भित्र भिडियो अर्को हुन्छ र बाहिर देखिने फोटो अर्कै हुन्छ । त्यस्तै भ्युअर बढाउनका लागि जे पनि गर्न तयार भएको देखिन्छ । अश्लिल भिडियो तथा कुराकानी राखेर भाइरल बनाउँछन् अनि पैसा कमाउँछन् । च्यानललाई बुस्ट गराउँछन् ।
तपाईले त्यस्तो गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न ?
–मैले त्यस्तो गरेको छैन । मैले पूर्ण समाजिक विषयवस्तुलाई समेटेको छु । जो पुरै परिवारका साथमा बसेर मनोरञ्जन लिन सकिन्छ । खासमा मेरो कमेडी हो च्यानल हो । म तराई मधेशको ग्रामिण क्षेत्रमा, गाउँघरमा हुने सानातिना कुरालाई मैले कमेडी मार्फत प्रस्तुत गरेको हुन्छु । त्यसमा रहेका अधिकाँश कलाकार मेरा परिवारीक सदस्य नै हुन् । मेरो श्रीमती, भाउजु, काकी, सुसुरा पनि त्यसमा अभियन गर्नुहुन्छ । अन्य कलाकारहरु पनि स्थानीय टोल छरछिमेकका नै हुन्छन् । त्यसैले मेरो यो पूर्णरुपमा समाजिक र पारिवारीक विषयवस्तुमा आधारित भएको हुनाले कुनै मिसाबट हुँदैन ।
युट्युव च्यानलमा परिवारका सदस्यलाई कसरी अभिनय गराउनुभयो त ?
–मेरो श्रीमती पनि कलाकार नै हुनुहुन्छ । तर गाउँ समाजको अवस्था हेर्दा अभिनय गर्न हिचकिचाउनु हुन्छ । तर म मनाउँछु र अभिनय गराउँछु । मेरा ससुर पनि कलाकार हुनुहुन्छ उहाँलाई अभिनय गराउन त्यति गाह्रो छैन । मेरा भाउज्यु र काकी कलाकार हुनुहुन्न । कथाले मागेपछि मैले अभिनय गर्न लगाउँछु । उहाँहरु शुरुमा अभिनय गर्न मान्नु हुन्न तर भन्दै गएपछि क्यामराको अगाडीमा गएर बोल्नुहुन्छ भने अनुसार अभिनय गर्नुहुन्छ । अरु कलाकार छरछिमेका हुन्छन् । मलाई कलाकारको अभाव छैन ।
तपाईको यो कामलाई त्यहाँको समाजले कसरी लिएको छ ?
–मेरो गाउँ र त्यस वरपरका गाउँले त्यति राम्रो लिएको छैन । बाहिर मेरो यो कामलाई राम्रो रुपमा लिएको छ । मैले समाजमा हुने साना भन्दा साना विषयलाई कमेडीको रुपमा प्रस्तुती गर्छु । त्यसले त्यहाँका जनतालाई राम्रो लाग्दैन र गाली गर्नुहुन्छ । यसले सबै कुरा देखाई दिन्छन् भनि रीस गरिरहेका हुन्छन् । म शुटिङ्गका लागि कही गए भने मेरो पछाडी केटाकेटीहरु लाग्छन् । अभिनय गर्न पाउँछु भनेर पछि पछि लागेका हुन्छन् केटाकेटीलाई विगार्न लागेका छन् भनि रीस गर्नेहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि धेरैलाई चित्त नबुझेर मेरो आलोचना गरेका हुन्छन् । कही झैझगडा भयो वा गाउँ समाजमा केही भयो भने म भिडियो बनाएर फेसबुकमा राखि दिन्छु अथवा युट्युवमा पनि राख्छु । त्यसले पनि धेरैलाई चित्त बुझेको छैन
यो युट्युव च्यानल खोल्ने सोच कहाँबाट आयो ?
–शुरुमा मलाई यसबारेमा थाह थिएन । मसँग केमेडी खालका थुप्रै भिडियोहरु थियो । मेरा एकजना साथीले मसँग मागेर आफ्नो युट्युव च्यानलमा राख्नुभयो । निकै चल्यो लाखौं मान्छेले हरे । यसरी तीनचारवटा भिडियो युट्युवमा राखेपछि चर्चा निकै भयो । पछि त्यो साथीले भिडियो अपलोड गर्न छाड्नुभयो । मलाई राम्रो लागि रहेको थियो । साथीले अपलोड नगरेपछि एउटा आफ्नै युट्युव च्यानल बनाउ भनेर म त्यसको प्रयासमा लागे । तर कसरी खोल्ने भनि थाह थिएन । काठमाडौमा यसबारेमा बुझ्दा ३०–४० हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने भन्यो । यदि मसँग त्यति पैसा त्यो बेला भएको भए म पैसा तिरेर भएपनि खोल्थे । तर पछि एउटा साथीले सित्तैमा खोल्दिनुभयो । यदि मसँग पैसा भएको भए म ठगिन्थे । तर राजविराजका एउटा साथीलाई भन्दा उहाँले सित्तैमा खोल्दिनुभयो ।
कलाकारहरुलाई पारिश्रमिक कतिको दिनुहुन्छ ?
–दिन्छु । गच्छे अनुसार दिन्छु । धेरै दिन सकेका छैन, किनभने त्यति आम्दानी पनि छैन । पैसा तिरेर कलाकार ल्याएपछि एकदिनमा ५–७ वटा शुटिङ् गर्छु । त्यसले अलि सहज हुन्छ । विषयवस्तु अनुसार शुटिङ गरेर राखेको हुन्छु । समय सान्दर्भिक त्यसलाई अपलोड विस्तारै अपलोड गर्छु ।